Banijya News | सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट, कुन क्षेत्रमा कति ? - Banijya News सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट, कुन क्षेत्रमा कति ? - Banijya News
सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट, कुन क्षेत्रमा कति ?
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा बजेट भाषण गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो वर्षका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रहेको छ ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र ६३ अर्ब ३७ करोड वैदेशिक अनुदान व्यहोर्ने र त्यसबाट समेत अपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० न्यून हुने देखिने त्यसमा थप ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने सरकारले योजना बनाएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गदा पनि नपुग हुने २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा बताए ।
खेलकुदमा २ अर्ब ७४ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुदमा २ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको हो ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा ४०% प्रतिशतले कटौती भएर २ अर्ब ३६ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसअघि घोषित ३ अर्ब ९९ करोड बजेटबाट ४० प्रतिशत कटौती भएको थियो । सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत भएका खेलाडीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रादेशिक रंगशाला, हाइ अल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर तथा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना लगायतका विषयलाई समेटेर उक्त रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि ४५ अर्व ९ करोड बजेट
सरकारले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नयाँ योजना अघि सारेको छ । कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि ४५ अर्व ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । दुध र तरकारीमा २ वर्षमा आत्म निर्भर हुने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । यस्तै, गहुँमा ३ वर्षमा ५ वर्षभित्र धानमा आत्म निर्भर हुने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले उखु किसानको भुक्तानी १५ दिन भित्र हुने बजेट भाषणमा बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आफ्नो भाषणमा विशेष गरी कोभिड माहामारीलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् । जेष्ठ नागरिकको को ३३ प्रतिशतले बृद्धि गरी ४ हजार मासिक पुगेको अर्थमन्त्री पौडेले बताए । युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान
सरकारले अक्सिन प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिबत पूँजीगत अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले एक सय वटा बेडभन्दा बढी क्षमताको अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने बजेटमा उललेख छ । सरकारले अक्सिनजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्न लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, आईसियू, एचडीयो, टेस्ट किड लगायत खरिद गर्न ४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । छ । कोभिड उपचारमा प्रयोग हुने औषधी खरिदमा भन्सार छुट दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
सरकारी कर्मचारीलाई भत्तासहित १० दिने भ्रमण बिदा
सरकारले आन्तरिक पर्यटनको प्रबर्धन का लागि सरकारी कर्मचारीलाई भत्ता सहित १० दिने भ्रमण बिदा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आन्तरिक पर्यटन प्रबर्धन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याईएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने बताए ।
चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत शुल्क छुट
सरकारले चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चलचित्र क्षेत्रलाई आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण शुल्क छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने ब्यवस्था मिलाइएको बताए । पहिलो र दोश्रो चरणको कोरोनाको महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेको छ । प्रदर्शकहरुले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा लाग्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब मासिक न्यूनतम १५ हजार
सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । अहिलेको पारिश्रमिक बढाएर मासिक आठ हजार पु¥याइएको र सम्बन्धित पालिकाले थप गरेर न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए ।
पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३३ अर्ब ५५ करोड
सरकारले पुर्ननिर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप १३ हजार ७ विद्यालयका १४ हजार १५५ कक्षा कोठा , १० ५ स्वास्थ्य संस्था, १९६ सांस्कृतिक सम्पदा र ३६ सरकारी भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रपति भवन , हरीहर भवन , कसरमहल त्रिचन्द्र कलेज लगायतका भवनको पुनर्निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ३९ स्थानमा एकिकृत वस्ती निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको पुस मासान्तपछि भुकम्प पुनर्निर्माणको काम सम्वन्धित बिषयगत मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षाव्यवस्था सहित विस्तार गर्न १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षाव्यवस्थासहित चार लेनमा विस्तार गर्न सो बजेट छुट्टयाएको बताए । आवगमनमा सहजताका लागि गुणस्तरीय यातायात विकास गर्न र प्रमुख सहरबीचको यात्रा अवधि अधिकतम दुई घन्टा हुने गरी गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त सडक तथा फ्लाइओबर निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
कञ्चनपुर –कमला, ढल्केबर–पथलैया र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार कार्यलाई तिव्रता दिइने, काकडभिट्टा इनरुवा, पथलैया–नारायणगढ, बुटवल कोहलपुर र बनबासा खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने पौडेलले बताए । बजेटमा राजमार्गको सघन बस्ती भएको क्षेत्रमा अन्डरपास, तथा फ्लाइओभर, चुरे क्षेत्रमा सुरुङमार्ग, वन्यजन्तु टनेल निर्माण गरिने बताए ।